Dib-u-eegista Firefox 3, Robotyada, Ku darida iyo Tweaks | Martech Zone
Dib-u-eegista Firefox 3, Robotyada, Waxyaabaha lagu daro iyo Tweaks
Jimco, Juun 20, 2008 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Waa maalintii labaad la Mozilla Firefox 3 oo aan hore u qarbudaada Safari ka dekedda. browser waa arrin degdeg ah (waxaan male ahayna ilaa oo dhan my ku darista caanka ah iyo updates ammaanka yar yimaadaan). Waxaan aaminsanahay Way u Qalantaa hagaajinta iyo sugi karaa dhowr maalmood ilaa ay dar-ons kor u yihiin in xawaaraha.
Hagaajinta Isticmaalka ka Layout Button
Isbeddelka ugu muuqda ee muuqda markii aad bilawdo FF3 waa badhanka weyn ee dhabarka ku yaal Toolbar. Mahadnaq kooxda is-dhexgalka ee isbeddelkan. Qaababka caadiga ah ee nidaamyada menu-ka ee codsiyada waxay muhiimad u leeyihiin booska, laakiin naqshadayaasha Mozilla waxay go'aansadeen inay tallaabo dheeraad ah u qaadaan iyagoo ballaadhinaya badhanka dambe. Tani waa isbeddel weyn… dadka isticmaala hubaal waxay u badan tahay inay isticmaalaan badhankan in ka badan kuwa kale; natiijada, cabirka iyo meelayntu waa horumar weyn.
Qaar ka mid ah Tweaks-ka Firefox 3
Hadaad qorto ku saabsan: config in bar url in Firefox 3, aad leedahay qaar ka mid ah helitaanka goobaha qaar ka mid ah in ay yihiin labada xiiso leh - oo khatar ah. Halkan waxaa ku qoran dhowr ugu cadcad my aan horay u habaynta:
guud.warnOnAboutConfig - haddii aadan sida digniin marka aad about.config furan, double-riix si aad u soo jeedin BEEN digniinta.
biraawsarka.urlbar.autoFill - laba jeer ku dhufo RUN iyo URL-yadaada ayaa si otomaatig ah u dhameystiri doona iyadoo lagu saleynayo taariikhdaada.
browser.urlbar.doubleClickSelectsAll - laba-jeer ku dhufo 'RUN' iyo marka aad laba-gujiso guji bartaada url, waxay dooran doontaa URL-ka oo dhan halkii ay ka ahaan lahayd qayb ka mid ah.
guud.SmoothScroll - laba-guji ku dhaji 'TRUE' waxayna si fiican ugu dhex rogaysaa bogagga biraawsarkaaga.
Qaabeynta.spellCheckDefault - u deji tan 2 waxaadna higaadin kartaa dhammaan meelaha, ma ahan oo keliya meelaha qoraalka!
Ukunta Easter: Farriin ka socota Robotyada
nooca ku saabsan: aalado ku jira barta url ee loogu talagalay qosol weyn! Wanaagsan in la arko horumariyeyaasha oo leh dareen maad ah. Waxaan jeclaan lahaa in codsiyo badan ay ku dari doonaan Ukunta Easter sidan oo kale.
ku saabsan: mozilla Waa ukunta kale (waxaan u malaynayaa waxa uu ahaa in version kasta).
The mid Add-on Waxaan ma aan samayn karo aan lahayn
The Add-on delicious Bookmark si fudud waa fantastic. Haddii aad weli wax badbaadiya bookmarks loo siiyaa biraawsarkaaga, IT JOOJI! Del.icio.us kuu ogolaanaya in aad xiriir la wadaagaan, iyaga abaabulo, tag iyaga, oo xitaa post to your blog.
Muuqaalka aan rajeynayo waa la cusbooneysiin karaa
Waan jeclahay muuqaalka Internet Explorer ee midabbada url bar cagaaran ku leh bogagga aaminka ah. Waxaan jeclaan lahaa inuu jiro ku saabsan: config dejinta taas.
Tags: adobeka soo kabtaanheerka cigtagaga.jsalgorithm raadinta googlemaareeyaha tag googleomniturewarbixintakhabiir ku ah boggatagista
Shirkadaha u weecda Shabakadaha Bulshada ee Gudaha
Warbaahinta Bulshada iyo Istaraatiijiyadda Ganacsiga
Jun 20, 2008 saacadu markay ahayd 7:38 AM
Re: bar cagaaran URL - FF3 wuxuu midabkiisu ka kooban yahay URL bar cagaaran markaad booqato baraha qaarkood. Halkaas, halkii favicon kaliya ka muuqan lahaa bidix, magaca shirkada ayaa sidoo kale u muuqda (labaduba waxay ka muuqdaan asalka cagaaran).
Waxaan u maleynayaa inay la xiriirto shahaadada amniga maxaa yeelay markaad jiirkaaga dul wareejiso aagga hadhka leh waxaad helaysaa tusaal qalab oranaya "Verified by: Verisign, Inc."
Jun 20, 2008 saacadu markay ahayd 9:06 AM
Hm. Runtii waan jecelahay muuqaalka badhamadaada, laakiin badhamadayda FF3 uma eka sidaas. Ma maqaar baa laga yaabaa?
Jun 20, 2008 saacadu markay ahayd 10:34 AM
Maqaar la'aan, Michelle. Mashiinkayga Windows-ku wuxuu leeyahay muuqaal aad u eg.
Jun 20, 2008 saacadu markay ahayd 9:23 AM
Michelle - badhanka loo dhigay mac-da ayaa umuuqda waxoogaa kayar marka loo adeegsado FF3 kombiyuutarka. Taasi ma noqon kartaa farqiga u dhexeeya?
Jun 20, 2008 saacadu markay ahayd 9:29 AM
Waxaan sidoo kale u adeegsadaa Calaamado Macaan, gaar ahaan qaab aan ku wadaago astaamaha u dhexeeya kumbuyuutarrada. Ka dib waxaan u istcimaalaa erey-furaha nooc kasta oo calaamadeysan oo leh "ff:" xagga hore. Marka, dhammaan calaamadaha calaamadaha lacageed waxaa lagu calaamadeeyay "ff: maaliyad" waxaana loo badinayaa inay yihiin kuwo qarsoon. Waxaan markaa calaamadeyn karaa sumaddaas sida aan ugu jeclahay, sidaas darteed waxay ku soo muuqanaysaa aaladda macaan iyo miiska.
Waxaan isticmaalaa macaan, laakiin SocialMarker (http://www.socialmarker.com) sidoo kale wuxuu leeyahay badhan aan ku keydinno ilaa 30 goobood oo kala duwan oo lagu calaamadiyo bulshada.
Gacan ku haynta faafinta qoraalada. 🙂
Jul 3, 2008 markay tahay 12:08 PM
Waxaan isticmaali jiray FireFox 3 ilaa beta 3 ama 4, waxaanan xaqiiqsaday in barta barxadeedku ay isticmaasho raadinta qoraalka oo buuxa cinwaanka iyo URL dhammaan bogagga taariikhdaada. In kasta oo ay ku qaadato ilbiriqsi ama laba in lagu raadiyo dhammaan xogtaas, tani waa muuqaal adeegsi weyn oo markii hore aanan dan ka lahayn markii hore, laakiin hadda jacayl.